I-16 yeWallpaper Wallpaper Uyilo lweKhaya lakho - Iimbono zeWallpaper Wallpaper Izimvo - Ipaseji
Isikhokelo Sakho Sokuhombisa Ikrisimesi
Isithuba Sobuchule Kunye Nezisombululo Zokugcina Igumbi Ngalinye
Iingcebiso Zolungiso Lwengcali
Yenza Ikhaya Lakho Likulungele Ukuwa
I-16 yeWallpaper Wallpaper Uyilo lweKhaya lakho - Iimbono zeWallpaper Wallpaper Izimvo
Iphephadonga eliphefumlelweyo, iMall Wallpaper, uGraham kunye noBrown, uFarrow kunye neBhola
Jonga ezi zoyilo zephepha lodonga ukukunceda ukuba wenze eyona nto uyibonayo kuqala ekhayeni lakho.
Sibuze abanye abathengisi kunye nabaqulunqi ukuba yeyiphi eyona nto bayikhethileyo kwiphepha lodonga. Iphe I-lus ifumana iingcebiso kunye namacebo avela kuyilo lwangaphakathi ekuhombiseni ipaseji yakho, ekudaleni indawo yokucinga ngokusebenzisa iiprinta ezinesibindi ngendlela eyiyo.
ijasmine roth net efanelekileyo
Jonga igalari 16Iifoto UGraham kunye noBrown 1Kaninzi 'UGraham kunye noBrown
'I-Trompe L'Oeil yingqokelela yangoku yoyilo olubonakalayo kwiithoni ezithulileyo ezingwevu. Ilitye leRose I-echoes ebukekayo yemizobo ye-Baroque yenkulungwane ye-16, enobungqongqo bamatye kunye neentyatyambo eziethe-ethe. Eyilelwe ukuba ibukeke ngathi ziindonga ezenziwe ngombala, olu luyilo lodonga olusicaba lunika umfanekiso-ngqondweni wentyatyambo eqingqiweyo, uthabathe ngokugqibeleleyo uyilo lwangoku lweentyatyambo ngokuqinisekileyo ukwenza indawo yokuthetha epasejini yakho. ' -Graham kunye noBrown
Sifumana ikhomishini yeemveliso ezithengiweyo ngamanye amakhonkco kweli nqaku.
UGraham kunye noBrown MbiniKaninzi 'UGraham kunye noBrown
Yenza ingxelo nge Imvelaphi , ebonisa ipateni yejiyometri yehipnotiki.
'Ishicilelwe ngokwedijithali ngefuthe eliphezulu, uyilo ngalunye lodonga lucaciswe kakuhle ngesiphumo sokwenyani sefoto, esinika umbono omangalisayo wokukhanya.' - UGraham kunye noBrown
ULaura Ashley 3Kaninzi 'ULaura Ashley
Uyilo olungapheliyo kwi-archive yethu, yethu Iphepha lodonga lika-Annecy iya kongeza indawo ephucukileyo nakweliphi na igumbi. Le golideiphepha lodongaijongeka intle esetyenziselwa udonga lwendawo okanye igumbi lonke, kwaye ilungele zonke izinto zangaphakathi, hayi iipaseji kuphela, kodwa iikhitshi elinomoya ofanelekileyo kunye namagumbi okuhlambela nawo. ' -ULaura Ashley
ULaura Ashley 4Kaninzi 'ULaura Ashley
Iphepha lodonga linokuxhasa kwaye liphucule inkangeleko kunye nokuziva kwemihombiso yakho, kwaye yongeze ukubamba kwakho kwindawo ohlala kuyo. Lo mfanekiso uprintiweyo lodonga, Isadore Camomile,iyahlambeka kwaye ngeethoni ezithambileyo ezimthubi namhlophe. ' -ULaura Ashley
Iphephadonga eliphefumlelweyo 5Kaninzi 'Iphephadonga eliphefumlelweyo
'Ingcebiso enye yokuhombisa iipaseji endizifumana ziluncedo ngokukodwa kukusebenzisa iphepha lodonga elibhalwe ngokucacileyo kwiindonga ezintathu emva koko uyilo lweepateni eludongeni lwesine. Ekuhombiseni ngale ndlela udonga lwepateni luyatsala abantu bangene ekhayeni lakho, njengale ndledlana yeholo Umbala weNkwenkwezi weColololl kunye neNtsiba ezingwevu . ' -Christine Westcott, iphepha lodonga eliphefumlelweyo
Iphephadonga eliphefumlelweyo 6Kaninzi 'Iphephadonga eliphefumlelweyo
'Ukubonakala kokuqala kubalulekile kwaye ukungena kwamakhaya kubalulekile, nokuba wamkela iindwendwe ekhayeni lakho, okanye kukwenza uzive kamnandi xa ubuyela ekhaya emva kokusebenza nzima kosuku. Umbala wecolar teal lodonga yindlela efanelekileyo yokwenza umendo oya ekhaya kunye ne-vibe yayo entsha, yanamhlanje kunye nokubengezela okukhanyayo okubonelela ngesiphumo esiphakamisayo kwangoko. ' -Christine Westcott, iphepha lodonga eliphefumlelweyo
Farrow kunye neBhola 7Kaninzi 'Farrow kunye neBhola
Uyilo olukhulu olunemigca enemibala eqinileyo lufezekile kwabo bafuna ukwenza ingxelo eqinileyo kwaye banokwenza neendlela eziphakamileyo zokuziva ngathi zincinci kwaye zi cozier. Umtya weChromatic , kunye nepop yayo yombane oluhlaza okwesibhakabhaka ebaleka ephepheni, inokusetyenziselwa ukubetha xa idityaniswe nomgaqo omnyama omangalisayo kwizinto zomthi.
Njengomthetho, imibala eyomeleleyo, efudumeleyo iya kwenza ipaseji ibonakale imfutshane ukuze isebenze kakuhle ukuba unendawo efana netonela, kunye nokwenza amagumbi adibeneyo abonakale eqaqambile kwaye emakhulu. Nokuba upeyinte nje udonga lwangasemva ithoni okanye ezimbini ezimnyama kunomhlaba okanye iphethini yephepha lodonga zingenza umohluko. Zama ukupeyinta udonga lokuphela kwendlela yeChromatic Stripe kwiWorsted ukongeza ubukhazikhazi bokwenyani nobukho kwindawo. ' -U-Charlotte Cosby, intloko yoyilo , Farrow kunye neBhola
Farrow kunye neBhola 8Kaninzi 'Farrow kunye neBhola
Uyilo lwesikali esincinci lunokuba lukhetho olukhulu ukuba ufuna ukuvula indawo. Umtya obanzi ngemibala yayo ethulisiweyo kunye nemivimbo ebanzi iya kwenza ipaseji izive ilula kwaye ivulekile.
Imibala elula, epholileyo iya kwenza ipaseji ibonakale inde. Zama ukusebenzisa umbala omtsha nothambileyo njengoBlue Blue okanye oMnyama kudonga lokugqibela lwepaseji ebhalwe kwi-Broad Stripe ukunceda ukudala indawo yokucinga. ' -U-Charlotte Cosby, intloko yoyilo , Farrow kunye neBhola
Farrow kunye neBhola 9Kaninzi 'Farrow kunye neBhola
'Kutheni ungazami ukunika uyilo olunemigca yesiqhelo ngokujija iphepha ngokuthe tye. Umtya weCloset isebenza ngokukodwa kule nkangeleko yanamhlanje. Amaphephadonga eFarrow kunye neBhola ayenziwe sisebenzisa iipeyinti zethu, isenza ukuba kube lula ukudibanisa ipeyinti kunye nephepha ukwenza imbonakalo engenamthungo ukusuka epasejini ukuya kwamanye amagumbi ekhaya.
Unokukhetha ukukhetha umhlaba okanye umbala wepateni kwiphepha lakho elinemigca kwaye usebenzise lo mbala kwimithi okanye ezinye iindonga, okanye ukhethe ilaphu kunye nempahla ephefumlelwe liphepha. Ukujonga ulwalathiso, ukubonakala kwemonochromatic, dibanisa Umtya oPhezulu nge Umthunzi omhlophe kwizinto zomthi uze wongeze izinto ezintsimbi. ' -U-Charlotte Cosby, intloko yoyilo , Farrow kunye neBhola
Uhambo 10Kaninzi 'Umhombiso wokuHamba
Ukukhanya kukuqwalaselwa okuphambili xa kufikwa ekukhetheniiphepha lodongauyilo; ukuba umthombo wakho wokukhanya wendalo ulinganiselwe, sula imibala emnyama kwaye endaweni yoko ukhethe iipateni ezinendawo enkulu emhlophe. Eyethu Ubugcisa bodonga baseRinjani lukhetho olukhulu.
Ngenye indlela, izipili ziyindlela entle yokunceda ukukhanyisa indawo, kwaye ukuba ibekwe ngokuchanekileyo iya kuba nefuthe elikhulu; ayincedisi kuphela indawo ukuba ibonakale inkulu kodwa ikhanyise ngcono. ' Umhombiso wokuHamba
Umhombiso wokuHamba Shumi elinanyeKaninzi 'Umhombiso wokuHamba
Ulwalathiso lwalo naluphi na uyilo oluphindwe kabini okanye ipateni (ethe tye okanye ethe nkqo) nayo kufuneka ithathelwe ingqalelo kwaye inokusetyenziselwa ukwenza ukukhohlisa kwendawo. Uyilo olukhombe phezulu olufana nolwethu I-Samui yoBugcisa boDonga izakusebenza ngokugqibeleleyo kwabo baneesilingi ezisezantsi, umzekelo. ' Umhombiso wokuHamba
Photowall 12Kaninzi 'Photowall
Njengokungena kwikhaya lakho liphela, ipaseji yindawo efanelekileyo yokwenza ingxelo. Ukusuka kwiipateni ezinesibindi zokuthomalalisa ukuthoba iithoni ezingathathi hlangothi, kukho umbono opheleleyo wezinto zangaphakathi eziza kunceda ukudala umbono ongapheliyo.
'Iindibaniselwano zephepha lodonga kunye nepeyinti ziye zavuselelwa ukwenza i-take ekhethekileyo kwilizwe langaphakathi lesitayile se-chic. Isitshisi imbonakalo ebuyileyo yomqolo ngokudibanisa ipeyinti yokuhombisa kunye nephepha lodonga - oku kunceda ukuvula iipaseji ngezitepisi ezivalekileyo. Zama ukusebenzisa uyilo lodonga ngeempawu zesibindi (njenge Monstera ukwenza indawo yakho ibonakale inkulu kwaye yongeze kwimibala yepopu yokugcina izinto zibonakala zinomdla. ' - Photowall
Photowall 13Kaninzi 'Photowall
Iindledlana zeHolo zikwindawo efanelekileyo yokwenza amanqaku ovavanyo ekhayeni lakho, kodwa ihlala iyindawo esingachithi ixesha elininzi sicinga ngendlela yokuhombisa. Uyilo lodonga kunye neempawu zasendle (njenge Isipha seTropiki) zilungele ukujova ubuntu ngakumbi kwiipaseji ezingaphefumlelwanga. Ukulungisa ngokukhawuleza, khupha imibala yentsingiselo kwiphepha lakho lodonga kwaye ubonise iithowuni kwizixhobo zakho. ' - Photowall
Iphepha lodonga lodonga 14Kaninzi 'Iphepha lodonga lodonga
'Iindledlana zeHolo zinokuba yindawo enqabileyo ekhaya ukuya kwisitayile, ngokungabikho kwendawo eyinto eqhelekileyo enegalelo kubunzima ekuhombiseni. Kuyenzeka, nangona kunjalo, ukuhombisa le ndawo ngendlela enefuthe ukuze wamkelwe ekhayeni uyilo oluphezulu kunye nesitayile endaweni yecala, iindonga zedrab.
Ngokukhetha i ukuprinta kwejometri ngokungqindilili Xa udibene nee-serene hues ezifana ne-quartz rose kunye nokuzola, ungayiphucula kwangoko ipaseji yakho, ngelixa ugcina indawo ikhanya kwaye inomoya. - Imizobo eseludongeniIphepha lodonga
Iphepha lodonga lodonga Shumi elinantlanuKaninzi 'Iphepha lodonga lodonga
Ukukhanya okuncinci, ukungasebenzi kakhulu kwiindonga kunokubangela umbono wendawo. Ukwenza ngokwezifiso iindonga zakho zepaseji ngento enomdla kwaye inesibindi inokusebenza ecaleni kwesayizi encinci kunye nokujova idosi yesitayile kwangoko nje xa wena okanye iindwendwe zakho zingena emnyango. A Imoody, ihlathi elinenkungu eludongeni ingavula indawo ngaphakathi kwayo, ngelixa ikubulisa ngoluhlobo luthandwayo lweScandi. ' Iphepha lodonga
Iphepha lodonga lodonga 16Kaninzi 'Iphepha lodonga lodonga
'Sebenzisa indawo encinci ukuze ufumane inzuzo; awugubungeli indawo enkulu njengoko ubuya kwenza kwelinye igumbi, ke unokukwazi ukuba nesibindi kwaye uye kuprintwa olunokuthi lube nesibindi kunokuba ukhetha igumbi lokuhlala okanye igumbi lokulala. A iphepha lokwenene lezitena Unokwenza imimangaliso, uyila inkangeleko enoburhabaxa enokunika ipaseji yakho uhlaziyo kwangoko ngaphandle kwengxabano kwaphela. ' - Imizobo eseludongeni Iphepha lodonga
OkulandelayoIngqokelela yasentwasahlobo ye-H & M ilapha Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukuba babonelele ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
Inqaba kwiLake Tahoe-Uyilo lwangaphakathi lweLake Tahoe Ekhaya
Guqula i-Pot yakho yangoku kwangoko ibe yiFryer yomoya kunye nesi siCiko ukusuka eAmazon
Izityalo ezigxotha iingcongconi- Izinto ezigxotha izinambuzane
Imibala eyonyusa ii-Appetites-Imibala eyanciphisa ii-Appetites
Ikrisimesi: Iindaba, Iingcebiso, Izimvo Kunye Nenkuthazo
Imihla yokugqibela yokuthumela iKrisimesi ka-2019-Imihla yokuPosa iKrisimesi
Abazalwana bePropati beHGTV bathenge nje iKhaya ecaleni kukaDrew Scott kunye noLinda Phan
Igumbi lesiXeko saseNew York elingezantsi kukaKumkanikazi uElizabhete linokuba lelakho ngeedola ezingama-30,000 ngenyanga
Jonga Ngaphakathi kweNew York City Penthouse kaJohn Lennon
Ipeyinti yegadi: Ukukhetha Ipeyinti yeeNgcingo, Ifanitshala, Iindonga, iiSheds
Uhlobo lokuhlambela lwaseFrance-isihombiso saseFrance sokuhlambela
ICinderella's Inqaba yePeyinti eNtsha yePeyinti Inabalandeli beDisney abaThethayo
I-Starcity Co-Living -Uhlala njani eSilicon Valley ngexabiso eliphantsi
Kutheni le nto kufanelekile ukuba usebenzise i-China Emihle yonke imihla
iikhabhathi zasekhitshini imibala kunye nezitayile
billy eyakhelwe ngaphakathi
ususa njani iphepha lodonga ngokulula
bonisa iifoto eludongeni